လိပ်ပြာစံအိမ်က တကယ်ပဲ ကြည့်ရတန်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားလား? -
Posted on February 8, 2019 Author Aye Mon Kyaw	Comment(0)
ထိုင်းဒါရိုက်တာ ရိုက်ကူးပြီး ဝတ်မှုံရွှေရည်၊ နိုင်းနိုင်းနဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင် ပြည့်ပြည့်တို့ အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ လိပ်ပြာစံအိမ်ရုပ်ရှင်ဟာ မပြခင်တည်းက အတော်လေး လူပြောများနေတဲ့ဇာတ်လမ်းပါ။
Trailer ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ချောက်ချားရပြီး ဇာ တ်လမ်း/ဇာတ်သိမ်းကို လုံးဝမှန်းလို့မရတဲ့ ရှားပါးမြန်မာဇာတ်လမ်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် မြန်မာသရဲကားဆို တစ်ခါမှ သွားမကြည့်တဲ့ အက်ဒ်မင်လည်း ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ တင်တင်ချင်းနေ့မှာတင် သွားကြည့်ပြီး ယောင်းတို့ကို ဖောက်သည်ချရတာပါ။
ရေနံချောင်းမြို့က ကိုလိုနီခေတ် ရှေးအိမ်ကြီးမှာ ကြင်နာတတ်တဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာအမျိုးသား (ဒေါင်း) နဲ့ သူမွေးစားထားတဲ့ ကလေးသုံးယောက်နေထိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်မှာ ဓာတ်ပုံဆရာလေး တနေရာကို ထွက်သွားခဲ့ပြီး ခုထိသေသလား ရှင်သလား မသိရပါဘူး။ အဲ့ကာလ ၁၉၆၀ကာလ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မို့ တိုင်းရေးပြည်ရေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့် ဘယ်သူမှသူပျောက်သွားတာကို ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။
အဲ့လိုနဲ့ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဘက်ခေတ်ကို ရောက်လာပါတယ်။
ဒီရေနံချောင်းမြို့က ရှေးအိမ်ကြီးကိုပဲ ဓာတ်ပုံဆရာမိသားစု က ပြောင်းလာပါတယ်။ ဒီ မိသားစုလေးမှာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်တည်းရှိပေမယ့် ကလေးဟာ အော်တစ်ဇင်ရောဂါဖြစ်နေပါတယ်။ ခပ်ဆိုးဆိုး ကလေးလေးဖြစ်ပီး ဖအေကလွဲလို့ ဘယ်သူနဲ့မှ မတည့်ပါဘူး။
သူတို့ပြောင်းလာတဲ့ အိမ်ကြီးမှာက ထူးဆန်းတာတွေ ကြုံလာရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၅၀တုန်းက အိမ်ကြီးမှာ နေထိုင်သူတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ အတော်လေးအသက်ဝင်နေပြီး မြင်ရတဲ့သူကို ချောက်ချားစေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သမီးလေးကလည်း အရင်လိုဆိုးပေမနေဘဲ ရုတ်တရက် လိမ္မာလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေ့ဆို အိပ်ပြီး ညဆို နိုးလာတယ်။ အဖေကိုပဲကပ်တဲ့ သမီးက အမေကိုလည်း ချွဲလာတယ်။ အိမ်အိုကြီးထဲက ရှေးအရုပ်တွေကို ရှာရှာဖွေဖွေ ထုတ်ဆော့လာတယ်။
သမီးဖြစ်သူကို မသင်္ကာတဲ့ နိုင်းနိုင်းတစ်ယောက် သမီးနဲ့ ညဘက်ဆော့ပေးရင်း ရင်ထိတ်ဖွယ်ရာ နာနာဘာဝပုံရိပ်ကို သမီးဖြစ်သူမှာ တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ…. သူတို့ရဲ့ သမီးအရင်းဟာ လိပ်ပြာဖွက်ခံထားရမှန်း သိလိုက်တဲ့အခါ…. ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သမီး လိပ်ပြာကို ရှာဖွေပြီး ကယ်တင်ရပါတော့မယ်။
ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်မှာ စံအိမ်ကြီးရဲ့ ပိုင်ရှင် နာနာဘာဝ မေမေရှိနေပါတယ်။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ နာနာဘာဝမေမေက မိသားစုစုံစုံညီညီ ဖြစ်လိုတာမို့ ကလေးတွေရဲ့ လိပ်ပြာအားလုံးကို အိမ်ပြန်လာစေချင်သူပါ။
သမီးလေးရဲ့ လိပ်ပြာကို ဒေါသကြီးတဲ့ မေမေက ဖွက်ထားတဲ့အခါ….ဒီမိသားစုလေး အရင်လို ပျော်ရွှင်နိုင်ပါတော့မလား? ဒီနာနာဘာဝ မေမေက ဘယ်သူလဲ? ဘာလို့ ဒီလိုတွေ လုပ်နေတာလဲ? လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၅၀ကျော်က ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာကကော မွေးစားကလေးတွေပစ်ပြီး ဘယ်ရောက်နေတာလဲ?
ဒါတွေကိုတော့ ကိုယ့်ဟာကို ကြည့်ရှုပါနော်။
အက်ဒ်မင့်လို တော်ရုံသရဲကားကို မဖြုံတဲ့သူ၊ ဂျီးများတဲ့သူတောင် ဒီရုပ်ရှင်ကို ကြောက်လွန်းလို့ မနည်း ရင်ဖိ၊ နားပိတ်ပြီး ကြည့်ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဆို ပေါက်ပေါက်ဘူးကို တောင် လန့်ပြီး လွှတ်ချမိတော့မယ့် အထိပါပဲ။
ရေနံချောင်းမြို့ရဲ့ အလှကို Aerial photography လို့ခေါ်တဲ့ ဝေဟင်ကနေ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြပြီး တင်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံက အတော်မိုက်ပါတယ်။ နောက်ခံဇာတ်ဝင်တေးကိုလည်း ကော်ပီ မသုံးထားဘဲ မြန်မာ့ရိုးရာ သီချင်းလေးတွေ ဖြစ်တဲ့ သီတာလေးတို့ အိမ် နဲ့ ကြောင်ကြီးမြီးတို ကို သုံးသွားပါတယ်။ အသံတည်းဖြတ်မှုနဲ့ ဖန်တီးမှူက ကောင်းလွန်းတာမို့ သီချင်းသံကြားတာနဲ့တင် ချောက်ချားပြီး ကြက်သီးထမိပါရဲ့။
သဘာဝကျတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ( ကစ်ဆို ပီပြင်အောင် မိတ်ကပ်တောင် မလိမ်းထား) ၊ ကွန်ပျူတာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေ နဲ့ သရဲခြောက်တဲ့ အခန်းတွေကလည်း အတော်လေး ကျေနပ်စရာကောင်းတာမို့ နှစ်နာရီကြာ ရုပ်ရှင်ကို ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်တောင် မသိ။
အက်ဒ်မင်ကတော့ အမှတ် ၁၀၀မှာ ၉၈မှတ်ပေးတယ်။ ဒီလောက်ထိ ကောင်းမယ်လို့တောင် မမျှော်လင့်ထားဘူး။ မြန်မာကား ကြည့်နေတယ်လို့တောင် မခံစားရဘဲ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းမီတဲ့ ရုပ်ရှင်အဖြစ် အပြည့်အဝ ခံစားရစေပါတယ်။
နှစ်ခုပဲ။ အလင်းအမှောင်ပိုင်းကို သိပ်အားမရမိဘူး။ နောက်ပြီး ခိုခိုဒေါင်းမျက်နှာကို မိတ်ကပ်ဖန်တီးမှုပိုင်းက အားနည်းတယ်။ သိပ်မပီပြင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခိုခိုဒေါင်းရဲ့ ရသမြောက် သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကောင်းလို့ အဲဒီအားနည်းချက်က မမြင်၇လောက်အောင်ပါပဲ။
ခိုခိုဒေါင်းရဲ့ epic ဖြစ်တဲ့ dialogueတချို့ နဲ့ ကျရာ ဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်မှုက အနုပညာမြောက်လွန်းလို့ တစ်ရုံလုံး ဝေါခနဲ ထရယ်ကြတာတော့ တကယ်အမှတ်တရပါပဲ။ (ဘာလဲဆိုတာ သိချင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် သွားကြည့်ကြနော်😜)
ဘယျလိုလဲဆိုတော့လေ… ဖတျကွညျ့ပါလို့ 😛
ထိုငျးဒါရိုကျတာ ရိုကျကူးပွီး ဝတျမှုံရှရေညျ၊ နိုငျးနိုငျးနဲ့ ကလေးသရုပျဆောငျ ပွညျ့ပွညျ့တို့ အဓိက ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ လိပျပွာစံအိမျရုပျရှငျဟာ မပွခငျတညျးက အတျောလေး လူပွောမြားနတေဲ့ဇာတျလမျးပါ။
Trailer ဖှငျ့လိုကျတာနဲ့ ခြောကျခြားရပွီး ဇာ တျလမျး/ဇာတျသိမျးကို လုံးဝမှနျးလို့မရတဲ့ ရှားပါးမွနျမာဇာတျလမျးပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ မွနျမာသရဲကားဆို တဈခါမှ သှားမကွညျ့တဲ့ အကျဒျမငျလညျး ဒီရုပျရှငျကိုတော့ တငျတငျခငျြးနမှေ့ာတငျ သှားကွညျ့ပွီး ယောငျးတို့ကို ဖောကျသညျခရြတာပါ။
ရနေံခြောငျးမွို့က ကိုလိုနီခတျေ ရှေးအိမျကွီးမှာ ကွငျနာတတျတဲ့ ဓာတျပုံဆရာအမြိုးသား (ဒေါငျး) နဲ့ သူမှေးစားထားတဲ့ ကလေးသုံးယောကျနထေိုငျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ တဈရကျမှာ ဓာတျပုံဆရာလေး တနရောကို ထှကျသှားခဲ့ပွီး ခုထိသသေလား ရှငျသလား မသိရပါဘူး။ အဲ့ကာလ ၁၉၆၀ကာလ စဈတပျအာဏာသိမျးတဲ့အခြိနျမို့ တိုငျးရေးပွညျရေးမတညျငွိမျတာကွောငျ့ ဘယျသူမှသူပြောကျသှားတာကို ဂရုမစိုကျခဲ့ပါဘူး။
အဲ့လိုနဲ့ ၂၀၁၈ခုနှဈ ဒီဘကျခတျေကို ရောကျလာပါတယျ။
ဒီရနေံခြောငျးမွို့က ရှေးအိမျကွီးကိုပဲ ဓာတျပုံဆရာမိသားစု က ပွောငျးလာပါတယျ။ ဒီ မိသားစုလေးမှာ ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ သမီးလေးတဈယောကျတညျးရှိပမေယျ့ ကလေးဟာ အျောတဈဇငျရောဂါဖွဈနပေါတယျ။ ခပျဆိုးဆိုး ကလေးလေးဖွဈပီး ဖအကေလှဲလို့ ဘယျသူနဲ့မှ မတညျ့ပါဘူး။
သူတို့ပွောငျးလာတဲ့ အိမျကွီးမှာက ထူးဆနျးတာတှေ ကွုံလာရပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈ၅၀တုနျးက အိမျကွီးမှာ နထေိုငျသူတှရေဲ့ ဓာတျပုံဟာ အတျောလေးအသကျဝငျနပွေီး မွငျရတဲ့သူကို ခြောကျခြားစပေါတယျ။ သူတို့ရဲ့ သမီးလေးကလညျး အရငျလိုဆိုးပမေနဘေဲ ရုတျတရကျ လိမ်မာလာတယျ။ ဒါပမေဲ့ နဆေို့ အိပျပွီး ညဆို နိုးလာတယျ။ အဖကေိုပဲကပျတဲ့ သမီးက အမကေိုလညျး ခြှဲလာတယျ။ အိမျအိုကွီးထဲက ရှေးအရုပျတှကေို ရှာရှာဖှဖှေေ ထုတျဆော့လာတယျ။
သမီးဖွဈသူကို မသင်ျကာတဲ့ နိုငျးနိုငျးတဈယောကျ သမီးနဲ့ ညဘကျဆော့ပေးရငျး ရငျထိတျဖှယျရာ နာနာဘာဝပုံရိပျကို သမီးဖွဈသူမှာ တှလေို့ကျရတဲ့အခါ…. သူတို့ရဲ့ သမီးအရငျးဟာ လိပျပွာဖှကျခံထားရမှနျး သိလိုကျတဲ့အခါ…. ပြောကျဆုံးနတေဲ့ သမီး လိပျပွာကို ရှာဖှပွေီး ကယျတငျရပါတော့မယျ။
ဒါပမေဲ့ တဈဖကျမှာ စံအိမျကွီးရဲ့ ပိုငျရှငျ နာနာဘာဝ မမေရှေိနပေါတယျ။ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ နာနာဘာဝမမေကေ မိသားစုစုံစုံညီညီ ဖွဈလိုတာမို့ ကလေးတှရေဲ့ လိပျပွာအားလုံးကို အိမျပွနျလာစခေငျြသူပါ။
သမီးလေးရဲ့ လိပျပွာကို ဒေါသကွီးတဲ့ မမေကေ ဖှကျထားတဲ့အခါ….ဒီမိသားစုလေး အရငျလို ပြျောရှငျနိုငျပါတော့မလား? ဒီနာနာဘာဝ မမေကေ ဘယျသူလဲ? ဘာလို့ ဒီလိုတှေ လုပျနတောလဲ? လှနျခဲ့တဲ့ နှဈ၅၀ကြျောက ပြောကျဆုံးသှားတဲ့ ဓာတျပုံဆရာကကော မှေးစားကလေးတှပေဈပွီး ဘယျရောကျနတောလဲ?
ဒါတှကေိုတော့ ကိုယျ့ဟာကို ကွညျ့ရှုပါနျော။
အကျဒျမငျ့လို တျောရုံသရဲကားကို မဖွုံတဲ့သူ၊ ဂြီးမြားတဲ့သူတောငျ ဒီရုပျရှငျကို ကွောကျလှနျးလို့ မနညျး ရငျဖိ၊ နားပိတျပွီး ကွညျ့ရပါတယျ။ သူငယျခငျြးဆို ပေါကျပေါကျဘူးကို တောငျ လနျ့ပွီး လှတျခမြိတော့မယျ့ အထိပါပဲ။
ရနေံခြောငျးမွို့ရဲ့ အလှကို Aerial photography လို့ချေါတဲ့ ဝဟေငျကနေ ဓာတျပုံရိုကျပွပွီး တငျဆကျထားတဲ့ပုံစံက အတျောမိုကျပါတယျ။ နောကျခံဇာတျဝငျတေးကိုလညျး ကျောပီ မသုံးထားဘဲ မွနျမာ့ရိုးရာ သီခငျြးလေးတှေ ဖွဈတဲ့ သီတာလေးတို့ အိမျ နဲ့ ကွောငျကွီးမွီးတို ကို သုံးသှားပါတယျ။ အသံတညျးဖွတျမှုနဲ့ ဖနျတီးမှူက ကောငျးလှနျးတာမို့ သီခငျြးသံကွားတာနဲ့တငျ ခြောကျခြားပွီး ကွကျသီးထမိပါရဲ့။
သဘာဝကတြဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှေ( ကဈဆို ပီပွငျအောငျ မိတျကပျတောငျ မလိမျးထား) ၊ ကှနျပြူတာအထူးပွုလုပျခကျြတှေ နဲ့ သရဲခွောကျတဲ့ အခနျးတှကေလညျး အတျောလေး ကနြေပျစရာကောငျးတာမို့ နှဈနာရီကွာ ရုပျရှငျကို ဘယျလိုကုနျသှားမှနျတောငျ မသိ။
အကျဒျမငျကတော့ အမှတျ ၁၀၀မှာ ၉၈မှတျပေးတယျ။ ဒီလောကျထိ ကောငျးမယျလို့တောငျ မမြှျောလငျ့ထားဘူး။ မွနျမာကား ကွညျ့နတေယျလို့တောငျ မခံစားရဘဲ နိုငျငံတကာ အဆငျ့အတနျးမီတဲ့ ရုပျရှငျအဖွဈ အပွညျ့အဝ ခံစားရစပေါတယျ။
နှဈခုပဲ။ အလငျးအမှောငျပိုငျးကို သိပျအားမရမိဘူး။ နောကျပွီး ခိုခိုဒေါငျးမကျြနှာကို မိတျကပျဖနျတီးမှုပိုငျးက အားနညျးတယျ။ သိပျမပီပွငျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ခိုခိုဒေါငျးရဲ့ ရသမွောကျ သရုပျဆောငျခကျြတှေ ကောငျးလို့ အဲဒီအားနညျးခကျြက မမွငျ၇လောကျအောငျပါပဲ။
ခိုခိုဒေါငျးရဲ့ epic ဖွဈတဲ့ dialogueတခြို့ နဲ့ ကရြာ ဇာတျရုပျကို ပီပွငျအောငျသရုပျဆောငျနိုငျမှုက အနုပညာမွောကျလှနျးလို့ တဈရုံလုံး ဝေါခနဲ ထရယျကွတာတော့ တကယျအမှတျတရပါပဲ။ (ဘာလဲဆိုတာ သိခငျြ ကိုယျ့ဟာကိုယျ သှားကွညျ့ကွနျော)
Tagged Famous, Horror, Movie review, myanmar horror movie, the only mom, worth it
ကမ္ဘာ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ကျိန်စာသင့် ပစ္စည်းလေးခု
Posted on February 19, 2018 Author Aye Mon Kyaw
အရမ်းလှတဲ့ ခရမ်းရောင် ကျောက်ရယ် အသက်ဝင်လှတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ရယ်၊ နန်းတော်တ မျှခမ်းနားလှတဲ့ စံအိမ်ကြီးရယ် သာမန် သစ်သားကုလားထိုင်လေးရယ်က ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ကျိန်စာသင့်နေတယ်ဆိုရင် ယောင်းတို့ယုံကြမှာလား